Serivisy - Qingdao Zhuoya Machinery Co., Ltd.
Manolotra serivisy miato ho an'ny mpanjifanay rehetra am-pahatsorana izahay.
Injeniera matihanina hanome toro-hevitra ara-teknika mialoha sy varotra manohana ny drafitra, toy ny fifantenana unit, fifandrindrana, famolavolana efitrano, hamaly ireo fanontaniana sarotra hitan'ny mpampiasa mandritra ny fampiasana ary manome torolàlana ara-teknika.
Handefa mpizara matihanina sy teknika ho any amin'ny toerana fametrahana ny orinasan-tserasera ny orinasanay sy ny asa fanoloran'ny tarika rehefa avy nahazo fampandrenesana mpampiasa, ary hanao asa tsara amin'ny faneken'ny mpampiasa. Vondron-tserena tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny fametrahana, ny kaomisera.
Ny vanim-potoanan'aretina: hatramin'ny datin'ny fanekena na tamin'ny datin'ny garantiana herintaona nanangona 1 000 ora (izay misy azy roa lahy ireo), vokatry ny ampahany amin'ny orinasa namory ny tsy fitandremana na famolavolana tsy mety ary ny fisafidianana ny akora sy ny antony hafa nahatonga ny fahasimbana na ny mpizara hafa lesoka, mety tompon'antoka amin'ny garantiana ataon'ny mpamatsy.
Manaraka hatrany ny fahatsapan'ny andraikitra lehibe izahay, ny manome ny serivisy serivisy fanatsarana ny varotra anisan'izany ny torolàlana fametrahana, ny fomba fiasa amin'ny antsipirihany, ny fampiofanana feno, ny fomba fitantanana mety, ny fanampiana ny mpiara-miombon'antoka hamahana ny ahiahy rehetra amin'ny fotoam-pamokarana amin'ny ho avy.
Mba hahazoana antoka ny fihazakazahana ny tsipika famokarana dia hanamboatra olona teknika feno izahay hijanona eo ho fanohanana ilaina, mandra-pahatongan'ny tsipika mandeha tsara sy hitohy mandritra ny fe-potoana.
Ao anatin'ny vanimpotoana, ny faritra voaaro tsy fanimbana olona dia hosoloina maimaimpoana, ary hahemotra araka ny tokony ho izy ny vanim-potoana. Homena fotoana ara-potoana sy fanefana vidiny ihany ny fanoloana ireo faritra ivelan'ny vanim-potoana.
Na mandritra ny vanim-potoanan'ny fiantohana na tsia dia hamaly isika ao anatin'ny roa ora aorian'ny fandraisana ny fampahalalana ny fanaparitahana ny milina. Raha ilaina dia hanamboatra olona teknika hanamboarana ny lalànan'ny milina isika raha haingana. Tsy hijanona ny mpiasantsika raha tsy nesorina ny faharatsiana ary miasa tsara ny tsipika.
Mba hahazoana antoka ny fihazakazahana ny tsipika famokarana, ankoatry ny angon-drakitra an-tsoratra omena, dia handaminananay mpiasa ara-teknika ihany koa isika mba hanazarana ny fandidiana, ny fikolokoloana ireo mpanjifa, mandra-pahafahan'izy ireo hahay hanao ny asa rehetra sy ny fikojakojana.
Tsy hanao latsaky ny fitsidihana iray isan-taona izahay taorian'ny nivarotan'ny masinina anay. Ho an'ireo fanontaniana avy amin'ny mpanjifa dia hanao fanitsiana lehibe isika mba hanandrana ny fitaovana teo aloha hanatratra ny fepetra takian'ny toe-javatra vaovao.
Manome serivisy momba ny teknolojia momba ny teknolojia lavaara ho an'ny mpiara-miasa aminay maimaimpoana izahay.
Ny vanim-potoanan'ny fiantrana dia herintaona manomboka amin'ny fanekena farany.